Banyere – 2azụ
Home / Banyere
2fish.co bụ otu ụlọ ọrụ nke ikom na ndị inyom, gụnyere ole na ole Catholic nchụàjà, raara nye ịgbachitere na akọwa Catholic okwukwe–karịsịa ndị Roman Catholic okwukwe–site mere na eziokwu.
All na-nnọọ ka inyocha anyị na saịtị ma na-agụ ozi Chineke na anyị ịkọwa. Ị nwekwara welcome n'okpuru ajụjụ maka anyị “Jụọ a Onye Nchụàjà” peeji nke ma ọ n'okpuru a ọkacha mmasị ozizi. Anyị ga-biputere anata na-anabata ọdịnaya ozugbo o kwere omume, ma anyị bụ ndị a afọ ofufo nzukọ, na onye ọ bụla so nwere (opekempe) otu ọrụ oge nile.
Ruo n'ókè o kwere, ozi anyị bụ ozi ọma na ecumenical, enweghị mgbe arara Central kweere nke Katọlik. E nwere ihe ọzọ myirịta karịa iche n'etiti dị iche iche Christian ịrọ òtù, na mgbe anyị na-agba ndị myirịta, anyị ga-akọwa ihe mere anyị kwenyere na ihe anyị na-eme omume dị ka anyị na-eme.
Anyị na-atụ ime ya niile na anya, mfe English.
Anyị họọrọ aha “2azụ” n'ihi na nke abụọ pụtara.
Mbụ, dị ka ọrụ ebube nke (abụọ) Azụ na (ise) Ogbe achịcha na-egosi na onye ọ bụla nke Oziọma anọ, anyị chọrọ na-emetụta ọtụtụ mmadụ dị ka anyị nwere ike na dị nnọọ ole na ole ego. Ya mere, dị ka Springsteen bụrụ abụ, “Anyị na-countin’ na a ọrụ ebube.”
Nke abụọ, site na anyị n'ịgba (ruo n'ókè o kwere), nti, yana idobe okirikiri (na, Olileanya, egwu) ozi, anyị na-atụ enwetaghị ole na ole azụ, kwa. Kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.